Homeराष्ट्रिय खबरसंक्रमित अख्तियार प्रमुखसहितको टोली संसदीय समितिमा : जोखिममा को–को ?
काठमाडौ । समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च पदाधिकारीसम्म पुगको छ । मंगलबार अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित अन्य पदाधिकारीमा सो संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारका कुन–कुन पदाधिकारीमा संक्रमण भएको भनेर औपचारिक रुपमा जानकारी दिइएको छैन ।
सो बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरे, अन्य आयुक्तहरु डा. गणेशराज जोशी, डा.सावित्री थापा गुरुङ, सचिव, प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सहितको टोली संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागीको अनिवार्य जाँच गर्नुपर्छ : डा.समीरमणी दिक्षीत
कोरोना संक्रमित ब्यक्ति केहीदिन पहिले कुनै बैठकमा सहभागी भएको वा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको ब्यक्तिको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा.समीरमणी दीक्षित बताउँछन् । कोरोना संक्रमण लक्षणविहीन भएर फैलिने हुँदा कुनै व्यक्तिको परीक्षण गरेर रिपोर्ट आउनुअघि नै संक्रमण भएको हुन सक्ने भएकोले यसको जोखिम हुने उनले बताए ।
अख्तियारमा २० गते संक्रमण देखिनुमा कम्तिमा एक साता अगाडि नै व्यक्ति संक्रमित हुने उनले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. दीक्षितले भने–‘२० गते संक्रमण पुष्टि हुनका लागि १० गतेदेखि १७ गतेको बीचचमा संक्रमित भइसकेको हुनुपर्छ । दशौँ दिनदेखि संक्रमित भएर लक्षणविहीनको अवस्थापनि हुन सक्छ । ११ गतेको बैठकमा सहभागी सबैको अनिवार्य रुपमा परीक्षण गरिनुपर्छ । मास्क लगाएका छनैन् र त्यस्ता सामुहिक बैठकमा सहभागी छन् भने अनिवार्य रुपमा परिक्षण गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन ।’
कोरोना संक्रमितको अवस्था, ठेगाना र उनीहरुको सम्पर्कको बारेमा जानकारी नदिँदा संक्रमण भित्र भित्र झन् झन् फैलिएको जनस्वास्थ्यविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै कन्ट्रयाक ट्रेसिङका आधारमा पिपिसआर परीक्षणको मात्रा बढाउन पनि उनीहरुको सुझाव छ ।-रातोपाटी